केरुङ नाकामा नाकाबन्दीको झल्को, किन गर्दैछ चिनियाँ पक्षले अवरोध ? | Ratopati
केरुङ नाकामा नाकाबन्दीको झल्को, किन गर्दैछ चिनियाँ पक्षले अवरोध ?
काठमाडौं । २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको झल्को यतिबेला चिनियाँ नाकामा देखिएको छ । विगतमा चीनको केरुङ नाकामा नेपालतर्फ आउन लागेका कन्टेनरहरुको लस्कर हुन्थ्यो । तर यतिबेला नाकाबाट दैनिक ४ वटा कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यसमाथि पनि अधिकांश ट्रकहरु स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्रै छन् ।
'हामीले ३० जनालाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिन भन्यौं, अझै संख्या घटाउन लेवरको समेत काम गर्नसक्ने ड्राइभरलाई पठाएर १५ जनाले व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी गर्यौं । तर उहाँहरुले हाम्रो कुनै कुरा सुन्न चाहनुभएन । अहिले त छिमेकीदेखि थाकेको अवस्था छु,' रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले भने ।
'लकडाउन खुलेपछि व्यवसाय पुरानै गतिमा फर्किएला भन्ने सोचेका थियौं, त्यो पनि सोचेजस्तो भएन । नाका खुलेपछि सामान आउला, दशैं तिहारमा भने पनि व्यापार होला भनेको, यो गतिले त्यो पनि सम्भव देखिएन, हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो,' कटुवालले भने ।